Inona ilay fanekena vaovao? | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Inona no fifanekena vaovao?
Amin'ny endriny fototra, ny fanekena iray dia mifehy ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona amin'ny fomba mitovy amin'ny fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana ara-dalàna. Ny fanekena vaovao dia mandeha satria maty i Jesosy no nanao ny tester. Zava-dehibe ho an'ny mpino ny fahazoana izany satria ny fampihavanana azontsika dia azo atao amin'ny alàlan'ny "ny rany teo amin'ny hazo fijaliana", ny ran'ny Fanekena Vaovao, ny ran'i Jesosy Tompontsika. (Kolosiana 1,20).
Iza no hevitr'iza?
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fanekena vaovao dia ny hevitr'Andriamanitra ary tsy hevitra izay noforonin'ny olombelona. Kristy dia nanambara tamin'ny mpianany tamin'ny nametrahany ny Fanasan'ny Tompo: "Ity no rako amin'ny fanekena vaovao" (Marka 14,24:26,28; Matio). Io no ran'ny fanekena mandrakizay » (Hebreo 13,20).
Ny mpaminany taloha dia nilaza mialoha ny fahatongavan'ity fanekena ity. Isaia dia nanoritra ny tenin Andriamanitra "ho an'ilay olona nohamavoin'ny olona sy maharikoriko ny hafa firenena, dia ilay mpanompo izay eo ambany fahefan ... niaro anao aho ary nanao fanekem-pihavanana ho an'ny firenena" (Isaia 49,7-8; jereo koa ny Isaia 42,6). Porofo mazava izany momba ny Mesia, Jesosy Kristy. Tamin'ny alàlan'i Isaia Andriamanitra dia naminany koa hoe: "homeko azy ireo ny valisoa amin'ny fahamarinana ary hanao fanekena mandrakizay amin'izy ireo aho" (Isaia 61,8).
Niresaka momba izany koa i Jeremia hoe: "Indro, ho avy ny andro, hoy ny Tompo, hanao fanekena vaovao aho" fa "tsy toy ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny nitantanako azy ireo hitarika azy ireo hiala tany Egypta » (Jeremia 31,31-32). Io indray no antsoina hoe "fanekena mandrakizay" (Jeremia 32,40).
Nanantitrantitra ny fomba mampihavanin'ity fanekena ity i Ezekiela. Nomarihiny tao amin'ny toko malaza ao amin'ny Baiboly momba ny "taolana malazo": "Ary tiako ny hanao fanekem-pihavanana amin'izy ireo, dia tokony ho fanekena mandrakizay amin'izy ireo" (Ezekiela 37,26).
Fa maninona no misy fanekena?
Amin'ny endriny fototra, ny fanekena dia mamaritra ny fisakaizana eo amin'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona amin'ny fomba mitovy amin'ny fifanarahana ara-dalàna na fifanarahana ara-dalàna.
Io no tokana amin'ireo fivavahana satria amin'ny andriamanitra kolontsaina ny andriamanitra taloha dia tsy misy ifandraisany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny Jeremia 32,38 dia miresaka ny maha-olona akaiky an'io fifanekena io: "Tokony ho oloko izy ireo ary tiako ho Andriamaniny".
Ny frets dia efa ary mbola ampiasaina amin'ny raharaham-barotra sy fifanakalozana ara-dalàna. Tamin'ny fotoan'ny Testamenta Taloha, na ny fanao Isiraelita na ny mpanompo sampy dia nahitana ny fanekena ny faneken'ny zanak'olombelona tamin'ny sorona rà na fombafomba somary kely kokoa mba hanamafisana ny fatorana sy ny toerana voalohany amin'ny fifanarahana. Androany isika dia mahita ohatra maharitra momba an'io fiheverana io rehefa mifanakalo peratra amin'ny fomba ny olona mba hanambarana ny faneken'izy ireo amin'ny fanekena ny fanambadiana. Eo ambanin'ny fitarihan'ny fiaraha-monina misy azy ireo, ny toetran'ny Baiboly dia nampiasa fanao isan-karazany mba hametrahana tombo-kase ny fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra.
"Mazava fa ny hevitra momba ny fifanarahana amin'ny fifanarahana dia tsy vahiny amin'ny zanak'Israely, ka tsy mahagaga raha nampiasa an'io endrika fifandraisana io Andriamanitra mba hanambarana ny fifandraisany amin'ny olony" (Golding 2004: 75).
Ny fifanarahana nataon'Andriamanitra tamin'ny tenany sy ny olombelona dia mitovy amin'ny fifanarahana natao eo amin'ny fiaraha-monina fa tsy mitovy ny laharana. Ny fanekena vaovao dia tsy misy ny foto-kevitra momba ny fifampiraharahana sy ny fifanakalozana. Ankoatr'izay, Andriamanitra sy ny olona dia tsy mitovy. «Mihoatra noho ny fampitoviana eto an-tany ny fanekena masina» (Golding, 2004: 74).
Ny ankamaroan'ny frets antika dia samy manana ny kalitao. Ohatra, ny fitondran-tena tadiavina dia mahazo fitahiana, sns .. Misy singa iray momba ny valifaty izay aseho amin'ny lafiny fepetra nifanarahana.
Karazana governemanta federaly dia fahazoan-dàlana federaly iray. Ao aminy no misy fahefana lehibe kokoa, toy ny mpanjaka iray, fa manome ny fankasitrahany ho an'ny olom-peheziny. Ity karazana fifanekena ity dia tena mitovy amin'ny fanekena vaovao. Nomen'Andriamanitra ny olombelona ny fahasoavany raha tsy misy fepetra mialoha. Eny tokoa, ny fampihavanana vita noho ny fandatsahan-dra amin'ity fanekena mandrakizay ity dia tsy nisy ny fanisan'Andriamanitra ny heloky ny olombelona (1 Korintiana 5,19). Raha tsy nisy hetsika na fiheverana ny fibebahana, Kristy dia maty ho antsika (Romana 5,8). Miankina amin'ny fitondran-tena kristianina i Grace.
Ahoana ny amin'ireo fanekena ara-Baiboly hafa?
Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana ara-baiboly dia mamantatra fanekena efatra farafahakeliny hafa ankoatra ny Fanekena Vaovao. Ireo no faneken'Andriamanitra tamin'i Noa, Abrahama, Mosesy ary Davida.
Nanazava tamin'izy ireo i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny Kristiana Jentilisa tany Efesosy fa "olon-tsy fantatra ivelan'ny fanekena" izy ireo, fa ao amin'i Kristy kosa izy ireo ankehitriny "izay lavitra, noho ny ran'i Kristy" (Efesiana 2,12: 13), izany hoe amin'ny alan'ny fanekem-pihavanana Vaovao, izay ahafahan'ny fampihavanana ho an'ny olona rehetra.
Ireo fanekena tamin'i Noa, Abrahama, ary David dia ahitana fampanantenana tsy misy fepetra izay tanteraka mivantana amin'i Jesosy Kristy.
«Manao tahaka ny tamin'ny andron'i Noa aho, rehefa nianiana fa tsy tokony hanafotra ny tany intsony ny ranon'i Noa. Ka nianiana aho fa tsy te-ho tezitra aminao intsony na hanome tsiny anao. Fa ho rava ny tendrombohitra, ary ho potraka ny havoana, tsy mba hahafoy anao ny fahasoavako, ary ny faneken'ny fiadanako tsy ho lavo, hoy ny Tompo Mpamindra foo " (Isaia 54,9: 10).
Nanambara i Paoly fa Kristy dia taranaky Abrahama nampanantenaina, ary noho izany ny mpino rehetra dia mpandova ny fahasoavana mamonjy (Galatiana 3,15: 18). "Fa raha an'i Kristy ianao, dia zanak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana" (Galatiana 3,29). Ny fanoloran-tena federaly nasionaly an'i David (Jeremia 23,5: 33,20; 21) dia tanteraka tamin'i Jesosy, ilay "fakan'i Davida sy" ny mpanjakan'ny fahamarinana. (Apokalypsy 22,16).
Ny faneken'i Mosesy, antsoina koa hoe ny fanekena taloha, dia misy fepetra. Ny fepetra dia ho avy ny fitahiana raha toa ka nanaraka ny lalàn'i Mosesy voamarina ny Isiraelita, indrindra ny lovan'ny Tany Nampanantenaina, ny fahitana izay notanterahin'i Kristy ara-panahy: «Ary izany no mahatonga azy ho mpanelanelana amin'ny fanekena vaovao, amin'ny fahafatesany izay natao mba hanavotana ireo fandikan-dalàna eo ambanin'ny fanekena voalohany izay mahazo ny lova mandrakizay nampanantenaina » (Hebreo 9,15).
Ara-tantara, nahitana famantarana manondro ny fitohizan'ireo andaniny roa tonta ny frets. Ireo famantarana ireo koa dia ilazana ny fanekena vaovao. Ny mariky ny fanekena tamin'i Noa sy ny famoronana, ohatra, ny avana, ny fizarana hazavana maro loko. I Kristy no fahazavan'izao tontolo izao (Jaona 8,12:1,4; 9).
Ny famantarana nataon'i Abrahama dia voafora (Nomery 1: 17,10-11). Mifamatotra amin'ny marimaritra iraisana eo amin'ireo manam-pahaizana momba ny dikan'ny hevitry ny teny hebreo berith, izay adika hoe fanekena, teny mifandraika amin'ny fanapahana. Ny teny hoe "manintsana kitapo" dia mbola ampiasaina indraindray. Jesosy, taranak'i Abrahama, dia noforana araka io fanao io (Lioka 2,21). Nanazava i Paoly fa ny famorana dia tsy ara-batana ho an'ny mpino, fa ara-panahy. Eo ambanin'ny fanekena vaovao, ny "famorana ny fo dia mihatra amin'ny fanahy ary tsy amin'ny taratasy" (Romana 2,29:3,3; jereo koa Filipiana).
Ny Sabata dia famantarana ihany koa nomena ny fifanekena nataon'i Mosesy (Nomery 2: 31,12-18). Kristy no tony amin'ny asantsika rehetra (Matio 11,28-30; Hebreo 4,10). Io fahatoniana io dia eo ihany ary ankehitriny: «Raha i Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy ho niresaka momba ny andro iray taorian'izay Andriamanitra. Noho izany dia mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra » (Hebreo 4,8: 9).
Ny fanekem-pihavanana vaovao koa dia manana famantarana, ary tsy avana na voafora na Sabata. "Koa izao ny Tompo dia hanome famantarana ho anao: indro, manan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy izay hantsoiny hoe Immanuel" (Isaia 7,14). Ny famantarana voalohany hoe vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao isika dia hoe Andriamanitra dia niara-nonina tamintsika tamin'ny endrik'i Jesosy Kristy Zanany. (Matio 1,21:1,14; Jaona).
Ny Fanekena Vaovao dia misy koa fampanantenana. "Ary indro," hoy i Kristy, "hampidiniko aminao ny zavatra nampanantenain'ny raiko" (Lioka 24,49), ary io fampanantenana io dia fanomezan'ny Fanahy Masina (Asan’ny Apostoly 2,33:3,14; Galatiana). Ireo mpino dia voaisy tombo-kase ao amin'ny fanekem-pihavanana vaovao "miaraka amin'ny Fanahy Masina izay nampanantenaina, izay antoka amin'ny lovantsika" (Efesiana 1,13: 14). Ny tena kristiana dia tsy voafora amin'ny famorana fombafomba na andian-dahatsoratra, fa amin'ny fanamafisana ny Fanahy Masina (Romana 8,9). Ny hevitry ny fifanekena dia manolotra fivoarana sy halalin-javatra niainana izay ahafahan'ny fahasoavan'Andriamanitra mahatakatra ara-bakiteny, ara-panoharana, ara-panoharana ary amin'ny alàlan'ny fitoviana.
Iza amin'ireo frets mbola miasa?
Ireo fifanekena rehetra voalaza etsy ambony dia fintinina amin'ny voninahitry ny fanekena vaovao mandrakizay. I Paoly kosa dia mampiseho izany rehefa mampitaha ny faneken'i Mosesy, antsoina koa hoe fanekena taloha, miaraka amin'ny Fanekena Vaovao.
I Paoly dia nanoritra ny fifanekena nataon'i Mosesy ho "birao mitondra fahafatesana ary izay voasokitra taratasy misy vato" (2 Korintiana 3,7: 2; jereo ihany koa ny Eksodosy 34,27: 28), ary milaza fa na dia nanam-boninahitra aza izy taloha, "ny voninahitra dia tsy hohadinoina raha ampitahaina amin'ity voninahitra lehibe ity", hoy ny filazan'ny birao Ny Fanahy, amin'ny teny hafa, ny Fanekena Vaovao (2 Korintiana 3,10). "Voninahitra lehibe noho i Mosesy" i Kristy (Hebreo 3,3).
Ny teny grika ho an'ny fanekena, diatheke, dia manome heviny vaovao vaovao. Manampy trotraka ny refin'ny fifanarahana, izay fe-potoana na sitrapony farany. Ny teny berith dia tsy nampiasaina amin'io heviny io tao amin'ny Testamenta Taloha.
Ilay mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampiasa an'io fanavahana io grika. Ny Mosesy sy ny fanekena vaovao dia toy ny sitrapo ihany. Ny Fanekena Mosesy dia ny sitrapo voalohany, izay foanana rehefa voasoratra ny faharoa. "Alainy ny voalohany mba hahafahany mampiasa ny faharoa" (Hebreo 10,9). "Satria raha tsy nanan-tsiny ny fanekena voalohany, dia tsy hitady toerana hafa ny habakabaka" (Hebreo 8,7). Ny fanekena vaovao "dia tsy toy ny fanekena nataoko tamin'ny razambenareo" (Hebreo 8,9).
Noho izany i Kristy no mpanelanelana amin'ny "fanekena tsara kokoa mifototra amin'ny fampanantenana tsara kokoa" (Hebreo 8,6). Rehefa misy olona manoratra sitrapo vaovao, ny sitrapo teo aloha sy ny toe-piainany teo aloha, na inona na inona voninahitra be izy ireo, very ny fiantraikany, dia tsy mifamatotra intsony ary tsy misy ilana azy amin'ny mpandova azy intsony. «Amin'ny fitenenana hoe:« fanekena vaovao », hoy izy ny voalohany tsy lany daty. Nefa ny efa lany andro sy ny ho velona dia efa hifarana izao » (Hebreo 8,13). Noho izany, ny endrik'ireo taloha dia tsy azo takiana ho fepetra handraisana anjara amin'ny fanekena vaovao (Anderson 2007: 33).
Mazava ho azy: «Satria raha misy ny sitrapo dia tsy maintsy nisy ny fahafatesan'ny olona izay nanao ny sitrapony. Satria ny sitrapo iray dia vao manomboka manan-kery amin'ny fahafatesana; tsy mbola matanjaka io raha mbola velona ilay nanao azy » (Hebreo 9,16: 17). Ho amin'izany dia maty i Kristy ary mahazo fanamasinana amin'ny alalàn'ny Fanahy isika. «Araka izany dia hohamasinina indray mandeha isika rehetra amin'ny soron'ny tenan'i Jesosy Kristy» (Hebreo 10,10).
Tsy misy fiantraikany ny fametrahana ny rafitra sorona ao amin'ny Faneken'i Mosesy, «satria tsy afaka manaisotra ny ota amin'ny alàlan'ny ran'ombilahy sy ny ran'osilahy» (Hebreo 10,4), ary na izany aza, ny voalohany dia foanana ka afaka nampiasa ny faharoa (Hebreo 10,9).
Na iza na iza nanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia tena miahiahy fa ny mpamaky azy no nahafantatra ny dikan'ny fampianaran'ny Testamenta Vaovao. Tadidinao ve fa tamin'ny ahoana no tamin'ny fifanekena taloha tamin'ny andro izay nandà an'i Mosesy? «Raha misy mandika ny lalàn'i Mosesy, dia tsy maintsy maty izy raha tsy misy vavolombelona roa na telo» (Hebreo 10,28).
"Mahatonga sazy henjana tokoa, araka ny eritreretinao, fa mendrika ny fanitsakitsahana ny Zanak'Andriamanitra ary noheveriny ho maloto ny rà misy ny fanekena izay nahamasinany azy ary nanala baraka ny fanahin'ny fahasoavana" (Hebreo 10,29)?
Ny fanekena vaovao dia mandeha satria maty i Jesosy no nanao ny tester. Zava-dehibe ho an'ny mpino ny fahazoana izany satria ny fampihavanana azontsika dia azo atao amin'ny alàlan'ny "ny rany teo amin'ny hazo fijaliana", ny ran'ny Fanekena Vaovao, ny ran'i Jesosy Tompontsika. (Kolosiana 1,20).